Wargelin: Sannadguuradii 13aad ee kasoo wareegtay xasuuqii ka dhacay Dugsigii Sare ee Maxamuud Axmed Cali.
/Q: Cabdulfataax M. Cabdulle
Maanta oo ku beegan 10-ka Febaraayo ee sannadkan 2004, beesha Nuux Maxamuud meel kasta oo ay joogaanba, waxay si murugo iyo tiiraanyo leh u xusayaan sannadguuradii 13aad ee kasoo wareegtay xasuuqii 86 qofood oo dhamaantood ka tirsanaa beesha Nuux Maxamuud. Dadkaas waxaa si gardarro ah loogu gumaaday Dugsigii Sare ee Maxamuud Axmed Cali oo ku yiil degmada Kaaraan ee magaalada Muqdishu taariikhdu markay ahayd Feb. 10, 1991. Maalintaas iyada ah ciidamo hubeysan oo daacad u ah maamulkii Cali Mahdi Maxamed ee lagu soo dhisay dalka Jabuuti, ayaa si bani�aaddanimada ka baxsan u xasuuqay dadkaas. Sababta shacabkaas aan waxba galabsan loo xasuuqayna waxay ahayd cadowtannimo qabiil oo xilligaas si gaar ah loola beegsaday guud ahaan beelaha ku abtirsada Daarood.
Wax yar ka dib, marki la fuliyay xasuuqa dadkaas, Cali Mahdi Maxamed ayaa wareysiyo kala duwan ku sheegay in ilaa 50 qofood oo ka tirsan Jabhaddii USC la dilay kadib marki looga shikiyay in ay abuurayaan amni darro carqalad ku ah USC. Hadalkaas waxaa laga sheegay Idaacadda ku hadasha codka maamulkiisa, wuxuuna ahaa marin-habaabin loola jeeday in lagu baabi�iyo dambiyada dagaal ee la fuliyay. Shacabkan la xasuuqay waxay ahaayeen dad ku abtirsada beesha Nuux Maxamuud waxayna ab-wadaag yihiin qabiilka Majeerteen kamana mid ahayn jabhaddii USC. Sidoo kale ma ahayn dad hubeysan.
Dadkan la xasuuqay waxay isugu jireen arday, ganacsato iyo culumaa�udiin, da'dooduna waxay u dhexeysay (8 jir ilaa 65 jir). Cali Mahdi wuxuu wareysigiisa ku sheegay in tirada dadka la laayay ay ahayd ilaa 50 qofood balse tirada runta ah waxay dhamayd lix iyo siddeetan (86) qofood. Bayaanka idaacadda laga sheegay wuxuu muujinayaa ujeeddadiisa oo ahayd in uu daboolo ama qariyo falalka bani�aadannimada ka baxsan ee maamulkiisu ku kacay.
Xuskan sannadguurada 13-aad ee xasuuqii ka dhacay Dugsigii Sare ee Maxamuud Axmed Cali, oo ah mid aan ka baa�bi doonin xuxuusta dadka Soomaaliyeed ee nabadda jecel, gaar ahaan beesha Nuux Maxamuud, waxuu kamid yahay dhacdooyinka murugada leh ee ka dhacay dalka Soomaaliya 13-kii sano ee ugu dambeeyay. Haddaba, waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo hey'adaha aan dowliga ahayn ee u dooda xuquuqda aadanaha, in ay xil weyn iska saaraan sidii looga hortagi lahaa xad-gudubyada ka dhanka ah bini�aadannimada loona aqoonsado kuwa ka dambeeya dambiilayaal-dagaal. Sidoo kale waxaan u soo jeedineynaa dhammaan Ururrada Bulshada oo ay saxaafadda Soomaaliyeed qayb ka tahay in la hor mariyo ololaha wacyi galineed ee ku wajahan nabadda iyo dhowridda xuquuqda aadanaha, si loo abuuro jawi nabadeed oo saamaxaya in dadka Soomaaliyeed ay ku wada noolaadaan si nabad ah oo cadaalad iyo sinnaan ku dhisan, loogana digo kuwa geysanaya xadgudubyada ka baxsan Xuquuqda Aadanaha ee dhacaya goor walba.